Novela - Actualidad Literatura | Zvinyorwa Nhau (Peji 3)
Louisa May Alcott akafa musi waMarch 6, 1888 muBoston. Nhoroondo yake inozivikanwa pasi rose yaive yeVadiki Vakadzi, asi kugadzirwa kwake kwaive kwakakura kwazvo.
Sanderson's "Hwekupedzisira Humambo", chikamu chekutanga chewake "Akazvarwa kubva kuMist" trilogy, akandiratidza kuti fungidziro haina kufa, asi iri mupenyu kupfuura nakare kose.
Nzira yekunyora inoverengeka
Matipi ekunyora novel. Zvese zvaunoda kuti uzive kutanga kupa chimiro kune iro zano rinotambudza musoro wako.
Nhasi ndinounza mazita mashanu anozova edhisheni nhau muna Kukadzi. Ivo vakasimbiswa uye vatsva vanyori vanovimbisa nyaya dzakanaka.
Stendhal. Mitsara nezvidimbu zvemabasa ake pagore rake
Marie Henri Beyle kana Stendhal akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1793. Ini ndinoongorora mitsara nezvidimbu zvemabasa ake kupemberera gore rake.
Mabhuku gumi, ane vakwegura protagonists, ayo akakosha kuverenga.
Ivo vakasarudzwa sevanyaradzi vevanyori venhau havawanzo kuve vakuru. Panzvimbo iyoyo, zvinyorwa zvinotisiira mienzaniso mikuru ...
Zvakavanzika, mhosva uye rudo munguva dzeVictorian
Nguva yeVictorian yave uye ichave iri nguva uye sosi yezviuru uye imwe nyaya mumabhuku. Aya mazita mashanu anounza pamwechete rudo, chakavanzika uye mhosva.
Biography uye akanakisa mabhuku aDiana Gabaldon
Ngatifambei tichidzoka munguva kuburikidza neiyo biography uye akanakisa mabhuku aDiana Gabaldon, mugadziri weimwe yeinonakidza nhoroondo yenhema sagas.
Gustave Flaubert. Makore makumi manomwe nemanomwe emunyori waMadame Bovary kana Salambó
Gustave Flaubert akazvarwa musi waZvita 12, 1821, saka rave makore makumi maviri nemanomwe kubvira munyori wemabhuku maviri akakosha ezana ramakore rechi197, Madame Bovary naSalambó.
Marco Tulio Cicero aigara muRome, Robert Graves akaita kuti tigare muRome. Ivo vaviri vakaigovana sekurudziro uye vakashaya zuva rimwe chetero.
Kuongororwazve kwenyaya nyowani kugadziridzwa kuterevhizheni, mhemberero dze sagas yezvinyorwa zvekushambadza uye nhau dziri kuuya.
Isu tinozvinyudza muhupenyu uye mabhuku akanakisa aAlmudena Grande kuti tiongorore mungano dzeimwe remanzwi makuru enhoroondo yenyika yedu.
Wenhaka yeNhaka ndiJo Nesbø yazvino novel. Kuzvimiririra kune yake Harry Hole akateedzana, iri rimwe rakakura rakasviba uye rakanyanya bhuku nemunyori weNorway.
Gumi akanakisa esori enganonyorwa yenguva dzese.
Chisarudzo chega chega chevanoongorora apo patinowana vanyori vakaita saAgatha Christie kana Phillip Kerr vachikwiza mapendekete neanozivikanwa emhando iyi
James Fenimore Cooper. Wekupedzisira weMohicans nemamwe mabasa.
James Fenimore Cooper akafa munaGunyana 14, 1851, asi aive akazvarwa munaGunyana 15, 62 makore apfuura. Nhasi ndinoongorora hupenyu hwake uye ndinoshanda mundangariro dzake.
Kutanga Nyamavhuvhu, wongororo mbiri dzekuverengwa kuviri: yerudo, La villa de las telas, naAnn Jacobs, uye dema, 7-7-2007, naAntonio Manzini.
Iwo "enhau akareruka" kana "akareruka enhau" imhando yezvinyorwa zvakajairika kuJapan, uye kusvika nguva pfupi yadarika zvisingaonekwe zvachose neWest, asi izvo zviri kuvhura mukaha mumusika unopfuura miganhu yenyika yavakabva. Vanobva kupi? Vane nzvimbo kunze kweJapan?
Actor Russell Crowe chishuwo changu chekuita mafirimu zvishuwo uye anotendeuka makumi mashanu neshanu nhasi. Kupemberera, ini ndinoongorora ayo akakosha ezvinyorwa mavara.
Kubvumbi kunounza kwatiri akawanda edhita nhau. Ini ndinosimbisa aya mana nevanyori vakaita saMaría Oruña, María Dueñas, Bhuruu bhurukwa uye Arturo Pérez-Reverte.
"Murume akapfeka zvitema anga achitiza nemurenje, uye murume wepfuti anga achimutevera." Nemitsara miviri yakadaro ine simba inotanga "Iyo Rima Shongwe", saga yaStephen King iyo munyori iye pachake anoiona sehunyanzvi.
"Vamwari veAmerica." Chinyorwa chemunyori Neil Gaiman.
Chii chinoitika kuna vamwari veNyika Yekare kana vachizviwana vasina kutendeka, voga uye vasina rubatsiro kukondinendi iri mutorwa kwavari? Mubvunzo uyu ndizvo zvakazvibvunzwa naNeil Gaiman uye yaive genesi rebasa rake gurusa: "American Gods."
Mabhuku ekuadya ivo: nyaya pakati pezvitofu.
Gastronomic inoverengeka nevatungamiriri sevapikisiki, biographical kana fungidziro, ngano nekicheni senzvimbo huru yekuisa, adventures apo gastronomy inotamba chinzvimbo chinotungamira, uye kunyangwe mabasa ezvinyorwa anosanganisira mabikirwo emidziyo inoonekwa mavari pamapeji avo.
Mushure merima. Nhoroondo yakakwana kutanga naHaruki Murakami.
Kana iwe wagara uchida kuverenga Haruki Murakami, asi usingazive bhuku raunofanira kusarudza, ndinokurudzira zvikuru "After Dark." Nhoroondo pfupi kwazvo asi ine zvakawanda zvekutaura.
Zuva reMadzimambo. Kunyengedza uye zvipo. Uye ivo protagonists ezviuru zvemabhuku. Nhasi ndinoratidzira aya masere pano. Dema, epic uye yechinyakare.
Ongororo ye6 yezvinyorwa zvekutanga zvemunyika uye zvepasi rose mhosva dzemabhuku dzakapihwa muna Ndira 2018. Fitzek, Fernández Díaz, Castillo ...
Mabhuku e8 echando uye echando, mwaka wakakodzera kuverenga
Nguva yechando iri kuuya, mwaka wakanakisa wegore kwandiri uye imwe yeakanakisa kuverenga. Ini ndinoongorora aya masere mabhuku pamwe naye semunhu ari protagonist yemazita avo
Kirk Douglas, iyo ngano yeiyo yepamoyo Hollywood, atendeuka makore 101. Kuongorora kwemabhuku ake semunyori uye nemavara ake emanyorwa.
Gore riri kupera uye zvinyorwa zvenganonyorwa zvazvino zvakatangwa mumwedzi uno wemabhalanzi mapepa. Ini ndinoongorora mashanu emazita iwayo anobuda izvozvi.
Mwedzi waNovember unotanga uye nhau dzinonakidza dzekunyora dzinobuda. Aya angori mashoma. Kune vaverengi vemarudzi ese uye zvavanofarira.
Iyo firimu vhezheni ye _The Snowman_, bhuku raJo Nesbø rinotengesa zvakanyanya, rakaburitswa. Uye Harry Hole haana kufanirwa nemufananidzo uyu usina kunyorwa.
Kunyorera kutonhora kwematsutso tinoenda parwendo kubva kuBerlin kuenda kuHelsinki uye kuBeijing mune matatu matatu matema matema, asiwo nekuseka.
Ndizvozvo. Pave nemakore makumi maviri nemashanu kubvira iwo manoveli. Vanyori Murakami, Ellroy, Prachett, Moccia, Harris, Gordon, naJennings vakaburitsa mazita aya.
Nhasi tinoongorora chidimbu chipfupi kubva mubhuku "Los pazos de Ulloa" naEmilia Pardo Bazán. Tichaona hunhu hweiyo Naturalism yenguva.
Ini ndinotarisa gumi nematanhatu ezvakanakisa-anotengesa ezvakaitika mazita eruzhinji izvozvi muzvitoro zvemabhuku. Kune ese manakiro erudzi urwu rwakakurumbira.
Plinio, naFrancisco García Pavón, mupurisa akanakisa muLa Mancha. Mutero kune hunhu hukuru hwaPavon, nyaya dzake, nharaunda yake uye nevanhu vakamukomberedza.
6 matsva ematsotsi ematare anoburitswa mumatsutso. Kufambira mberi kwekuzviratidza uye kugadzira miromo yako. Kune vanoda rima.
6 zvinyorwa zvemaposta zvekurangarira kubva kumazera ese
Isu tinoongorora nyaya dzinotarisana nevatanhatu vane mukurumbira tsamba kubva kunoverengera nguva dzese. Zvekuti vatitumire mabhuku akanaka.
Mabhuku manomwe emazuva ano e LGTB kudada. Kupemberera kusiyana.
Mazuva ano LGTB World Pride 2017 iri kupembererwa kuMadrid.Tinoongorora mamwe emazita mazhinji panyaya iyi.
6 enganonyorwa uye enguva ino zvinyorwa izvo pamwe isu zvatisina kuziva aive epistolary
Nhasi tinoongorora zvitanhatu zvekare uye zvenguva ino zvinyorwa izvo zvimwe zvataisaziva kuti epistolary.
Rudo harumborwadzi saka nhasi, muActualidad Literatura, tanga tichida kukurudzira mabhuku matatu kuti tidanane nawo.
Nhasi tinoongorora nhanhatu nhanhatu dzine musoro wadzo chinhu chakakosha kwazvo: mvura. Novelties uye zvekare kudzikamisa iri rinouya zhizha.
7 mazita ekushambadzira nevapambi, kubva kuzvakakangwa naSalgari kana Sabatini, kuburikidza naSteinbeck kana Defoe uye vachipedzisira mumamisha seaya eVázquez-Figueroa.
Zana ramakore rekuzvarwa kwaJohn F. Kennedy, mumwe wevanhu vakakosha kwazvo muzana ramakore rechi7, inopembererwa. Tinoona mabhuku manomwe pamusoro pake.
Munyaya yanhasi tinokuudza kuti ndeapi makuru epashure mamiriro enhau muSpain: mapurisa, enhoroondo, eerotic, kuratidzira uye ndangariro.
"Iyo runako", yekutanga novel naSusana López Rubio
Nhasi tinotaura zvishoma nezve "El Encanto", yekutanga novel naSusana López Rubio. Yakaburitswa muna Kubvumbi apfuura uye tichazoiongorora pano munguva pfupi.
Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira mamwe maanovel akaburitswa muzana ramakumi maviri nemasere rakaiswa mune mamwe matunhu eSpain (dzinenge dzese).
Zuva raamai. Mabhuku matanhatu ekupa vanamai pane zvese zvavanofarira
Zuva raamai riri kuuya. Kune mabhuku matanhatu ekupa vanamai kune ese manakiro, mamiriro uye nzira. Chokwadi tinogona kuchiwana nenzira kwayo.
Mangwana rakaburitswa "Nhasi zvakaipa, asi mangwana ndezvangu" naSalvador Compán
Mangwana rakaburitswa "Nhasi kwakaipa, asi mangwana ndekangu" naCompán Salvador na Edhisheni Espasa. Iyo inoverengeka yakaiswa muma60s.
Sembwa nekatsi. Mabhuku mana eane shamwari dzepedyo.
Shamwari nhatu dzine ina makumbo nyeredzi mune ina nyaya mune aya mana mazita atinokurudzira. Kune vanoda mhuka nembwa uye katsi kunyanya.
Nhoroondo dzekare dzatinogara tichiona paIsita. Asi ivo vanovakirwa pamanoveli. Taverenga here? Tinoziva vanyori vavo here? Tinoongorora.
Mhumhi mune zvinyorwa. Chaichoicho, chekufananidzira, chinogara chichifadza.
Mhumhi ndechimwe chemhuka dzinonyanya kuwanikwa kuti dziwanikwe. Sevanyengeri chaivo kana pfungwa dzekufananidzira ivo vanogara vari chirevo chakanaka.
Ndiani asina kuverenga "Lazarillo de Tormes"?
Ivo vanhu vasina kuverenga iyo "Lazarillo de Tormes" vanosimudza maoko avo ... Ndinovimba handioni vakawanda vakasimudzwa. Kurudziro yechinyakare!
«Kugadzikana», chinhu chitsva kubva kuna Carlos del Amor
Muchinyorwa chanhasi tinokupa chitsva chichauya chinotevera Kurume 21 na Edhisheni Espasa: "Kugadzikana", ichangoburwa kubva kuna Carlos del Amor.
Mabhuku atinofarira? ona kuverenga. _Cyrano de Bergerac_, _The Phantom yeOpera_ uye _Les miserables_
Ona kana kuverenga. Dzimwe nguva tinosarudza kuona mabhaisikopo pane kuvhura bhuku. Ichokwadi? Iyi ndiyo mienzaniso yevatatu vechiFrench zvekare.
Tinopa bhuku idzva naSol Aguirre, "Rimwe zuva harisi zuva revhiki." Iyo isingaremekedze novel ichaita kuti iwe udedere kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Haruki Murakami anodzoka uye anozviita nekudhindwa kwebhuku rake "Zvandinotaura nezvangu kana ndichitaura zvekunyora", iro richaburitswa muna Kubvumbi 4.
Mabhuku mashanu ezana ramakore reRusununguko rweRussia. Kuedzwa uye kuongorora
Muna Gumiguru tichapemberera makore zana echiitiko chakakosha munhoroondo, iyo Russian Revolution ya100. Tinoona mamwe mazita enyaya.
Ivo ndeimwe yeshamwari dzakanakisisa dziripo. Uye ivowo mavara makuru ekunyora. Isu tinoongorora dzimwe dzembwa dzinotungamira mune zvinyorwa.
25 mazuva anoshamisa aine muchengeti Ricciardi, hunhu hukuru hwakagadzirwa nemunyori weNeapolitan Maurizio de Giovanni.
Edward Fairfax Rochester ndomumwe wevanodikanwa vequintessential munhau yerudo. Yakagadzirwa naCharlotte Brontë, yakave nezviso zvakawanda mufirimu.
Makore gumi nematatu apfuura uye ikozvino. Mabhuku andakaverenga nekuverenga.
Pazera remakore gumi nematatu ndakaverenga iwo ekutanga mabhuku anga achimaka nzira dzangu dzekunyora. Nhasi, kana ndave nemakore gumi nematatu zvakare, ndatoverenga zvimwe zvishoma.
Isu takaongorora Captain Jack Aubrey uye Dr. Maturin akateedzana naPatrick O'Brian. Dzinokosha adventures pagungwa kutanga gore.
Sterling Hayden yaive yakanakisa yegoridhe Hollywood yakaratidzirwa neMcCarthyite muroyi wekuvhima. Asi pamusoro pezvose aive mutyairi uye munyori akakurumbira.
Daphne du Maurier. Yake matatu akakosha echinyakare.
Iyo yakanaka nguva yekurangarira Daphne du Maurier, munyori weBritish uyo akaburitsa zvinyorwa uye nyaya dzekufungidzira, kutya uye gothic-kudanana nekubudirira kukuru.
Maviri anotarisirwa zvikuru zvinyorwa zvitsva zvemwedzi uno
Tiri mumwedzi waMbudzi uye maviri anotarisirwa mabhuku ekunyora emwedzi uno akatosvika. Vanyori vayo: Zafon naLorenzo Silva.
Tinorangarira mazita matatu evateveri veHondo Yenyika II, mumakore ekutora kweFrance nemaGerman, kwavo Kuramba uye nyaya.
Cruises pazvikepe zvine mukurumbira uye zvine mukurumbira mumabhuku epasirese. Isu tinotanga Pequod. Tiri kuenda kunovhima machena machena.
Kana nhabvu ikava mabhuku.
Davids Peace's "Yakatukwa United" inoonekwa sebhuku rakanakisa remitambo. Inoratidzira nyaya yemurairidzi wenhabvu Brian Clought.
Iyo inoverengeka "Rudo uye dzidziso" inogona kuve iri bhuku rakanakisa revabereki kudzidzisa vana vavo zvakanaka kubva pane zvido zvavo sevabereki.
Edhisheni Espasa inoburitsa «Versalles. Kurota kwaMambo »naElizabeth Massie
Musi waMay 3, Edhisheni Espasa yakaburitsa nhoroondo yenhoroondo nemunyori Elizabeth Massie, yakanzi "Versalles….
Ongororo yebhuku «Como el sol para las flores» naIrene Villa
Kwemwedzi ini ndaive nebhuku rangu «Como el sol para las flores» naIrene Villa yakaburitswa mu ...
Pamazuva akakosha seaya atiri kusangana nawo (Isita) uye pasina chinangwa chekukanganisa kunyangwe vechitendero ...
Harper Lee atisiya kamwe kamwe asi basa rake rinoramba riripo. Tinounganidza mitsara minomwe kubva kubasa rake rine mukurumbira Kuuraya Nightingale.
Mabhuku mana kuti unzwisise zvirinani kupokana kwemadzinza
Aya mabhuku mana kuti anzwisise zvirinani kupokana kwemadzinza anova echisimba mafungidziro azvino munguva dzino dzinonetsa.
Kusarudzwa kwemabhuku naAlicia Giménez Bartlett
Isu tinopa iyi sarudzo yemabhuku naAlicia Giménez Bartlett, iyezvino 2015 Planeta Prize nebhuku rake "Hombres Akashama". Pane chawakaverenga here chake?
Nhasi uno inoratidza makore zana nemakumi masere nemashanu ekuberekwa kwaAgatha Christie, mambokadzi wemhando dzemapurisa. Pano tinokurudzira shanu dzakanakisa enganonyorwa dzemunyori.
Ikozvino kutengeswa «Wese iwo moto», ichangoburwa kubva kuEngeles Caso
Ichangoburwa kubva kuEngeles Caso yave kutengeswa: "Moto wese iwoyo", nyaya yevatatu vakashinga vanyori munyika yevarume vanogovana chishuwo chakavanzika.
Mangwana anoenda kutengeswa "Nhasi ndichaita nyika ive nzvimbo iri nani", ichangoburwa kubva kuna Laurent Gounelle
"Nhasi ndichaita kuti nyika ive nzvimbo iri nani" ndiyo ichangoburwa kubva kuna Laurent Gounelle, nhoroondo inodzidzisa iwe kunakidzwa neminiti yega yehupenyu. Mune Edhisheni Planeta.
Novels ayo anotaridzika nekufungidzira zvakafanana: 'Shutter Island' uye 'Mwari Akamonyara Mitsara'
"Mitsara Yakamonyoroka yaMwari" uye "Shutter Island" ndiwo maviri enganonyorwa ane zvivakwa zvekufungidzira zvakafanana. Isu tinoverenga izvo zvinoitika.
«Kunyange ichinaya», naTeresa Viejo, fungidziro yepfungwa izere nezvakavanzika
"Ipo kuchinaya", iyo nyowani naTeresa Viejo, inoverengeka yeanoona rudo nyaya dzerudo uye zvakavanzika zvemhuri. Isu tinowana zvimwe pamusoro penyaya iyi.
"Musikana ari muChitima", naPaula Hawkings, ino yechirimo yekunyora chiitiko
Isu tinotaura nezve "Musikana ari paChitima", chinonakidza chepfungwa kuburikidza nenyaya inomhanya-mhanya inosungira muverengi kubva papeji rekutanga.
«La Favorita», Aurora García Mateache, nyaya yerudo pakati paAlfonso XII naElena Sanz
Mu "La Favorita" Aurora García Mateache anotaurira nyaya yerudo pakati paAlfonso XII nemuimbi we opera Elena Sanz. Mune iyo Sphere yeMabhuku
Ongororo: «Mubati weBvudzi weBlue Division», naJosé Ignacio Cordero
Iyo Hairdresser yeBlue Division inyaya inotaurira kupona kwemurume akapusa anotarisa ...
Ongorora: "Insularity, rwomukati rwendo rwemumhanyi", naRalph del Valle
"Insularity, rwomukati rwendo rwemumhanyi", naRalph del Valle, inyaya yakadzama, izere nema nuances uye mazano. Usapotsa wongororo.
Wongorora uye raffle ye "Iyo Dudziro Dudziro" naRafael R. Costa
Wongorora uye raffle ye "Iyo Dudziro Dudziro" naRafael R. Costa, bhuku hombe.
"Elysion", naAida Herrera - Booktrailer
Elysion, bhuku rekutanga raAida Herrera (Edhisheni Círculo Rojo) inotinyudza murudo rusingaperi uye zvakavanzika.
Ongorora: 'Mwoyo wekondor', naFrancisco Núñez Roldán
Ongororo ye 'Mwoyo wekondor', yakanyorwa naFrancisco Núñez Roldán, bhuku rakaburitswa muna Ediciones Áltera, rakaiswa muzana ramakore rechiXNUMX Europe
Ongororo ye 'Grey Wolf', yaJames Nava yechitatu yenhau, yakatanga kuburitswa muna2008 uye yakabuditswazve munaNovember 2014 naSniper Mabhuku.
Njodzi inosiririsa yeVana veMadzishe eKatorike
Njodzi inosuruvarisa yevana veMadzishe eKatorike ibasa hafu yenhoroondo hafu yeiyo biography iyo inotitaurira nezve hupenyu hwaIsabel, Catalina, María, Juana naJuan.
3 inoshanda kuyeuka Hondo Huru
Zana ramakore rekutanga kweHondo Huru rasvika uye ndeipi nzira iri nani yekuzvirangarira pane nekuverenga matatu makuru mabasa pachinhu ichi chechokwadi.
Amai vaMáximo Gorki
Gorky anorondedzera mune ino nyaya kumutswa kwevashandi, kuburikidza nehunhu hwaPelagia, Amai, pamwe nemwanakomana wavo, Vlasov, mushanduki.
Pano tinokusiira iwe runyorwa rwemakumi matatu nematatu enoverengera akakurudzirwa nepepanhau El País yekudonha uku
'Iyo yeyero yezvidhina mugwagwa' naJuan de Dios Garduño
Iyo novel Iyo Yero Brick Road ndiyo yekupedzisira mupiro kuSpanish inotyisa mabhuku nemunyori we ...
Ongororo ye 'Llamadme Cabrón', inoverengeka naJavier Fornell Fernández
Bhuku rinonzi Me Me Cabrón rakaburitswa muna 2011. Kubva ipapo kwanaya yakawanda uye munyori wayo ave kuda ku ...
Kukosha kwevanyori ...
Kuna Robert Ludlum chinhu chekutanga chaifanirwa kugadzirwa vasati vagadzira riano vaive mavara
Kudzokorora kwe "Iyo viscount demediado"
"El Vizconde demediadio", rakajeka basa naItalo Calvino ane protagonist, iyo Viscount yeTerralba, yakakamurwa kuita mbiri zvichikonzera zvinhu zviviri zvitsva
«Mutambo wemabhesi» kana kusangana kweiyo yese ...
Hermann Hesse akanyora "Iyo Bead Game", iro basa rakaiswa mune yakasarudzika Castalia, mune mutambo unoshanda kubatanidza ruzivo rwese
"Vakadzi", hunyanzvi hwaCharles Bukowski
"Vakadzi", hunyanzvi hwaCharles Bukowski umo hunhu hwake Hank Chinaski ndiye protagonist wenyaya izere nebonde nedoro.
Nhasi chimwe chinhu chikara chaitika kwandiri inyaya nyowani naDaniel Estorach Martín. Nyaya yemaguta makuru.
'Debora' naPablo Palacio
Kubva kuimba yekushambadzira yeBarataria, tinogashira iyi nyowani yebasa reDebora, nemunyori weEcuadorian Pablo Palacio. Zviri nezve…
'Husiku Hwekupedzisira hweTitanic' naWalter Lord
Zvakawanda zvakanyorwa nezve iyo nhamo huru inokonzerwa nekuchiva uye kudada kwemurume wemazuva ano. Kunyura kwe ...
Chimwe chinhu nezvechizvarwa che 'nini'
Chizvarwa chino, iro zita rakashatirwa iro "vakakura" vakatipa mhosva, zvinoreva kuti "haufunde kana ...
Nguva ina dzaManuela
Manuela Sáenz ndiye wekupedzisira mukuru rudo weRusununguko, Don Simón Bolivar. Akaenda naye mukati memakore masere ekupedzisira, ...
"Neiyi nzira, ndakadzidza kutarisana neruzivo rwega rudiki sechidzidzo chitsva chinotibvumidza, nekukasira, kuti tiite ...
Dhayari yenympho, bhuku uye bhaisikopo
Iyo firimu kuratidzwa kweiyo firimu ndicho chikonzero isu chatinoshandisa nhasi kutaura nezvebhuku mu ...
Chikumbiro chaJohn Grisham
Nhasi uno (kusvika parizvino) bhuku rekupedzisira nemunyori John Grisham, Chikumbiro, iri kutengeswa kuSpain. Pane chikuru ...
Mukomana mune Akabvarura Pijama
Maitiro akanaka ekumutsa kufarira kweumwe munhu munganonyorwa ndeyekuvaudza zvidiki zvidiki zvinoratidzira ...
Nhasi uno mucherechedzo wegumi nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe ekuberekwa kwaHorace Walpole, shasha ine hungwaru uyo ​​ane The Castle of Otranto (290)…